बर्षाको तस्बिर ट्रोल बनिरहेको बेला, उनका श्रीमान् संजोगले लेखे यस्तो स्टाटस !
काठमाडौं–अहिलेको ब्यस्त नायिका वर्षा राउत केही दिन यता तस्बिरकै कारण चर्चामा छिन् । प्रदिप भट्टराई द्वारा निर्देशित चलचित्र जात्रा जात्रै रिलिजको क्रममा अष्ट्रेलिया पुगेकी बर्षा बोल्ड पहिरनकै कारण सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलको सिकार बनिन् । उनले लगायएको पहिरन अलि धेरै बोल्ड भएको होकी भन्ने धेरैले प्रतिक्रिया दिइरहेका बेला गत साल मात्र वैवाहिक बन्धनमा बाधिएका बर्षाका श्रीमान संजोग कोइरालाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो लेखेका छन् ।’
जेठ ३ गतेबाट हल रिलिज भएको चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ अहिले अष्ट्रेलियाका विभिन्न सहरहरुमा पनि प्रदर्शन भइरहेको छ । ब्रिसवेन, एडलेड, सिड्नी, मेलवर्न लगायत नेपालीको उलेख्य बसाइ रहेको अष्ट्रेलियाका मुख्य सहरहरुमा चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ प्रदर्शन भइरहेको छ । ‘अष्ट्रेलियाका मुख्य सहरमा अहिलेसम्म करिब दुई दर्जन शो प्रदर्शन भइसकेको छ,” जात्रै जात्रा निर्देशक प्रदीप भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले पनि प्रदर्शन भइरहेको छ । नेपाली रहेका सहरमा अझै पनि प्रदर्शन हुनेछ ।”
चलचित्र प्रदर्शनकै लागि निर्देशक भट्टराई, कार्यकारी निर्माता तथा कलाकार रविन्द्रसिंह बानियाँ, विपिन कार्की र वर्षा राउत अष्ट्रेलियामा छन् । विदेशमा नेपालीको जनसंख्या धेरै रहेका ठाउँमा हलका केही शो भाडामा लिएर नेपाली चलचित्र देखाउने गरिएको छ । ‘जात्रा’को सिक्वेल ‘जात्रै जात्रा’मा विपीन कार्की, रविन्द्रसिंह बानियाँ, रविन्द्र झा, दयाहाङ राई र वर्षा राउत मुख्य भूमिकामा छन् । सुन काण्डलाई चलचित्रले मुख्य कथा बनाएको छ ।
बर्षाका श्रीमन सन्जोगले लेखेका स्टाटस :
म तिमीलाई प्रोत्साहन दिन्छु, तिमिलाई सम्मान गर्छु, र तिमिलाई साथ दिन्छु। म तिम्रो लडाईको समर्थनमा उभिनँ तयार छु । म संघर्ष र कठिनाइको समयमा तिमिलाई माया गर्नेछु। म तिमिलाई आनन्दित तुल्याउनेछु, र हाम्रो समय सँगसँगै जोगाउनेछु !! तिमि सँधै सही भन्न र सही काम गर्दैै छौ।